အခမဲ့လိင်ဂိမ်းဗီဒီယိုများမည်သူမဆိုအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်နှင့်မျှမခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်အမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းတစ်ခုလတ်ဆတ်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလာမယ့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်မဆိုအခမဲ့လိင်ပြွန်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဘယ်လိုအရာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုတော့ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူစွာပြောနိုင်ပါတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့ရုံအခမဲ့လိင်ပြွန်၏လူကြိုက်များလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်လူကြိုက်များလာလိမ့်မည်,ငါတို့အရာအားလုံးရှိသည်ကြောင့်,ကျနော်တို့ကစားသမားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတွေထဲကပျော်မွေ့ဖို့ကြွလာတစ်ချိန်ကသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်,သူတို့ကဧကန်အမှန်ပိုပြီးအဘို့တဖန်လာလိမ့်မည်.
ဤေနရာတြင္ရွိေသာစုေဆာင္းမႈ၏အရည္အေသြးကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆိုဒ္ရွိဂိမ္းအားလံုးသည္ေအာ္ပေရတာမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီနည်းပညာအသစ်ကအများကြီးပိုပြီးသာယာသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်များသည်ပို၍လက်တွေ့ကျသည်၊ဂိမ်းကစားခြင်းသည်ပိုမိုစွဲငြိဖွယ်ကောင်းပြီးရှုပ်ထွေးသည်၊အသံများကိုပင်ကောင်းစွာတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည်။ ကျနော်တို့လူတိုင်းအတွက်ဂိမ်းများကိုဆောင်ကြဉ်းကြောင်းပြောပါတယ်သည့်အခါသစ်ကိုဂိမ်းလည်းကျနော်တို့အဓိပ်ပာယျအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်သည့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းလိုက်ဖက်မှု,အတူလာကြ၏။, အကယ်၍သင်သည်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊မက်ကရယ်ကွန်ပျူတာ၊အိုင်အိုဒင်းမိုဘိုင်းကိရိယာသို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုနေပါကသင်ဤဂိမ်းကိုကစားနိုင်ပြီးထိတွေ့မျက်နှာပြင်မှအလိုရှိသည့်အတိုင်းကီးဘုတ်မှတူညီသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီစုဆောင်းမှု၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကအခမဲ့လိင်ပြွန်အပေါ်ပိုပြီးရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရှုဘို့လက်ျာကိုအစားထိုးစေသည်ရုံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်အရွယ်အစားနှင့်လိင်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုမျက်နှာပြင်၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်ကျော်ကျွန်တော်တို့ကိုရှေးခယျြပါစေလိမ့်မယ်အတွက်အမျိုးစုံပါပဲ။ ေအာက္ပါအပိုဒ္တြင္စုစည္းေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကိုေျပာျပပါမည္။
အင်္ကျီလက်တက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်းလှည့်ကွက်ပြီးသားလိင်ပြွန်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မျိုးနှင့်ဇာတ်ကောင်များအတွက်ပဲသလောက်အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကြောင်းလိင်ဂိမ်းတစ်ခုစုဆောင်းမှုရှိသည်။ ပြီးတော့အမျိုးအစားတွေ၊အမျိုးအစားတွေကိုလူကြိုက်အများဆုံးလို့မြင်နိုင်ဖို့လိင်ပြွန်တွေကိုရိုးရိုးလေးစစ်ဆေးပြီးလုပ်ရပါတယ်။ အမျိုးအစားများ၏ဤစာရင်းမှကျနော်တို့သိသူမြားလိင်ဂိမ်းကစားအကြားရေပန်းစားဖြစ်ကြောင်းကဆက်ပြောသည်။ ထိုမျှမကမည်သူမဆိုကိုနှစ်သက်နိုင်သောဤကြီးမားသောစုဆောင်းမှုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပုံကိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားများအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများသည်မဖွယ်မရာလိင်ဂိမ်းများဖြစ်သည်။ သင်ဒီမှာမိသားစုညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားနိုင်ပြီးအများကြီးပိုပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတအတွေ့အကြုံရှိသည်,သင်သည်သင်၏မေမေ,အစ်မ,သမီးနှင့်အတူရှိသည်ရလိမ့်မည်ဟုလိင်မှတပါး,သင်၏ကြက်တိုက်မှတဆင့်,သင်သည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အတွက်နည်းလမ်းများနှင့်အတူတက်လာရ. စိန်ခေါ်မှုများရှိလိမ့်မည်နှငျ့သငျလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သင့်ရဲ့ယုတ်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့လိင်ပြွန်ပေါ်များမှာကဲ့သို့ခစျြ,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ဤဂိမ်းနှင့်အတူသငျသညျအခြို့သောအကူအညီမဲ့ကျေးကျွန်အပြစ်ပေးသူတို့ကိုသင်ချင်သမျှကိုပြုပါအောင်ပျော်မွေ့ရလိမ့်မယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့တွန်းအားတွေ၊မြည်းတွေအပေါ်လိုချင်သလိုရူးသွပ်သွားနိုင်ပြီးနာကျင်မှုကိုမခံစားနိုင်တော့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစစ်အမှန်ခံစားရပါလိမ့်မယ်အော်သံ။
ရှေ့စာမျက်နှာကိုသင်စုဆောင်းမှုကိုလမ်းညွှန်နိုင်သည့်နေရာမှအပြည့်အ ၀ မီနူးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏အမျိုးအစားများအကြောင်းပြောခြင်းနှင့်အတူရပ်တန့်သွားပြီ။ သင်ဂိမ်းတစ်ခုရှာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှသည်ကစားခလုတ်ကိုနှင့်သင်၏ဘရောက်ဇာရှိဂိမ်းဝန်ကိုထိရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကစားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်သည်တူညီသောအမျိုးအစားမှသာမကလက်၌လက်သွားသောအလားတူသူများထံမှလည်းအလားတူဂိမ်းများကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်,သင်ဖေဖေသမီးဂိမ်းကစားခြင်းကိုကြိုက်လျှင်,ဆိုက်အေးခဲကနေအဲလျဆာနှင့်အတူသကြားဖေဖေဂိမ်းသို့မဟုတ်ပင်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများကိုအကြံပြုပါလိမ့်မယ်။, သင်ဤအသစ်အတှေ့အကွုံကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့,သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရှိသည်လိမ့်မယ်လမ်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျလိမ့်မည်.